नारामै सिमित 'घोराही-तुलसीपुर' स्मार्ट सिटी - Rajmarg Online
नारामै सिमित ‘घोराही-तुलसीपुर’ स्मार्ट सिटी
दाङ, २९ पौष । दाङको मुख्य शहर घोराही र तुलसीपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै दुई उपमहानगरपालिकाले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि सारे ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले तुलसीपुरलाई नमूना स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै अगाडि सारेको अवधारणाले जनस्तरमा राम्रै लोकप्रियता बटुल्यो । घोराहीले पनि यसैलाई पछ्याउँदै स्मार्ट सिटीकै अवधारणा अगाडि सा¥यो ।
स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरिएका दुई शहरका सडकले अहिले यो नारा अस्वाभाविक मात्र होइन असान्दर्भीक लाग्छन् । यसो हुनुको कारण– सस्तो लोकप्रियताका लागि विकासे नारा ल्याउने तर जनप्रतिनिधिहरुमा काम नगर्ने मौलाएको प्रवृत्ति । जसको गतिलो उदाहरण हुन्, घोराही र तुलसीपुरका बजारमा खाल्डा खुल्डी र जीर्ण सडक ।
तुलसीपुर बजारको हात्तीखौवा चोक आसपासको झण्डै दुई सय मिटर सडक पूर्णरुपमा उध्रिएको छ भने सडकभरि खाल्डै खाल्डा छन् । तुलसीपुर बजारको मेरुदण्ड तुलसीपुर ‘क’ लाइन सडकमा खाल्डा खुल्डी परेर छियाछिया बनेको छ, आजभोलि ।
बजारको मुख्य स्थान वीरेन्द्रचोकलगायत बजारभित्रका अन्य सडक र चोकहरुको हालत पनि उस्तै छ । सडकमा परेका खाल्डामा वर्खामा पानी भरिएर जल मग्न हुन्छन् । घाम लाग्दा धुलो उड्छ । सडकमा परेका खल्डा खुल्डीले स्थानीय र पैदल यात्रुहरुलाई हैरानी खेप्नुमात्र परेको छैन, सडक दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम समेत बढाएको छ ।
‘बाटैभरि खाल्डा छन् । पानी पर्दा खाल्डामा पानी भरिन्छ’, स्थानीय व्यवसायी रवि न्यौपाने भन्छन्, ‘सडकका यी खाल्डा खुल्डी हेर्दा स्मार्ट सिटीको नारा गिज्याएझै लाग्छ ।’
विकास निर्माणका ठूला नारा ल्याउनेभन्दा पनि आवश्यक ठाउँमा आधारभूत कुरामा ध्यान दिन जरुरी भएको उनी बताउँछन् ।
‘स्मार्ट सिटीको अवाधारण स्वागत योग्य छ’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि चाहिने आधारभूत विकास के हुन् ? यी कुरामा पहिले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ सस्तो लोकप्रियताका लागि नारा ल्याउने तर त्यस अनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा मौलाएको उनले सुनाए ।
जनप्रतिनिधिले स्मार्ट सिटीको नारा घन्काउनु भन्दा पहिले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नपर्ने बताउँछन् ।
जिल्लाको अर्काे ठूलो स्थानीय तह घोराही उपमहानगरपालिकाको मुख्य सडक कुटवा–खोलादेखि तुलसीपुरचोकसम्मको सडक ठाउँ–ठाउँमा जीर्ण छ । करिब दुई किलो मिटरको यो मुख्य सडकमा पाइलै पिच्छे साना–ठूला खाल्डा खुल्डी छन् । शहरको मुख्य सडकमात्रै हैन शहर बजारका भित्री सडक पनि उस्तै भत्किएर खाल्डामा परिणत भएका छन् ।
‘अहिले स्मार्ट सिटीको नाममा असान्दर्भिक नारा ल्याउने भन्दा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई हेरेर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्र्छ’– स्थानीय जयाराम खड्का भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्नु राम्रो हो तर आधारभूत विकास निर्माणका पक्षलाई नहेरी नारा मात्र घन्काउने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।’ स्मार्ट सिटीको नारा सस्तो लोकप्रियता भएको उनले सुनाए ।
उनका अनुसार स्मार्ट सिटीका सपना देखाउने भन्दा पनि शहर बजारका सडकका खाल्डा खुल्डी पुरेर जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
‘जनप्रतिनिधिलाई हामीले काम गर्न पठाएका हौं’ उनले भने, ‘विकास निर्माणका काम गरेर जनताको मन जित्ने हो । सस्तो नाराभन्दा पनि नागरिकका आवश्यकता के छन् ? समस्या कहाँ छ, त्यहाँ काम गर्नुपर्छ ।’
नारा ल्याउने काम नगर्ने प्रवृति हाँबी
जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनपक्षीय काम भन्दा पनि लोकप्रियताका लागि नारा ल्याउने प्रबृत्ति मौलाएको स्थानीय सरकार विज्ञ रमेशकुमार अधिकारी बताए । जनप्रतिनिधिले यी चार वर्षमा जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा सरलता र विकास निर्माणमा तीब्रता आउन नसकेको अधिकारी भनाई छ । उनले स्थानीय तहले विकास निर्माणमा जनमुखीढंगले काम गर्न नसकेको बताए ।
Prevसरकार गठनको ६ महिना पूरा, सम्झनलायक काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना
Nextदाङमा जारी एन्फा जिल्ला लिग माघ २ गतेसम्म स्थगित